Tombana sy vinavina : samy manana ny fijeriny ny taona 2016 ireo mpanao politika sy tompon’andraikitra | NewsMada
Iriana ny hipetrahan’ny fitoniana eto amin’ny firenena. Handray ny fihaonana an-tampon’ny Frankofonia sy ny Comesa isika amin’ity taona ity. Hanamarika ny tantara izany satria hiantraika amin’ny firenena sy eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena ny ho vokany.
Etsy andaniny, hohamafisina ny diplaomasia ara-toekarena efa natomboka ary hitombo ny fiaraha-miasa amin’ireo mpiara-miombona antoka vahiny sy eo amin’ny samy firenena.
Ny minisitra Atallah Béatrice.
Tsy mora ny mitantana firenena. Inoako anefa fa ho taona ho an’ny fitoniana sy ny fahamarinan-toerana ny 2016. Aoka haneho ny firaisankina sy ny fiaraha-miasa ny eo amin’ny samy Andrimpanjakana. Ohatra, ny mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna. Tokony hitovy fijery ny roa tonta ho an’ny tombontsoan’ny firenena. Tahaka izany koa, ho avy ny loholona. Manaraka izany, tokony hipetraka ny fifampitokisan’ny mpitondra sy ny entina.
Ny filohan’ny Antenimiera, Rakotomamonjy Jean-Max.
Tokony hapetraka mazava sy hampiharina ny paikadim-pirenena hiadiana amin’ny kolikoly. Anisan’izany koa ny fampiharana ny lalàna vaovao hiadiana amin’ny trafikan’andramena sy ny fanondranana an-tsokosoko ny harem-pirenena. Andrasana ary tokony hapetraka koa ny lalàna na ny satan’ny fifandraisana, hiantoka ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety.
Etsy andaniny, manohana hatrany ny vahoaka malagasy izahay amin’ireo fandaharanasa fampandrosoana.
Ny ambasadaoro Amerikanina, Robert Yamate.
Nanamarika iny taona iny tsy filaminana sy tsy fandriampahalemana ho an’ny vahoaka. Teo ny herisetra sy ny vonoan’olona. Niteraka voka-dratsy ho an’ny firenena sy ny isan-tokantrano ny krizy, nolalovan’ny firenena. Miaina anaty fahantrana lalina ny vahoaka nefa eo koa ireo mpanankarena vaovao. Mihanaka sy mahazo vahana ny kolikoly… Momba ny fampihavanan’ny FFKM, hitohy izany ho amin’ny fitoniana. Hitondra fanantenana betsaka ho antsika anie ilay Mpamonjy.